Manage maapplication ayo anokwanisa kuwana kune Vako vaunoshamwaridzana paMac | Ndinobva mac
Chimwe chezvinhu zvinoratidzira iyo Mac system ndechekuti pane zviito zvakawanda zvinoitwa nesisitimu pachayo pasina kukonzera matambudziko kumushandisi. Nekudaro, isu hatifanire kudzikisa kurinda kwedu maererano nezviito zvinoitwa nevechitatu-bato ivo vanoita muhurongwa hwedu uye chimwe chezvinhu zvavanowanzoda kuwana mukana kune avo vatinoshamwaridzana vatinayo muhurongwa hwedu.
Ehe, vechitatu-bato kunyorera vanoda kuziva iyo kutaurirana iyo yatinayo pane yedu ajenda nekuti ivo sosi yakachipa kwazvo yekugona kuve nevatengi vatsva kutumira maemail ekushambadza kana ndiani anoziva zvimwewo.
Mukati meMac system pane nzvimbo uko zvese zvine chekuita nechengetedzo system zvinogoneswa. Nzvimbo ino iri mu Sarudzo dzeSystem> Chengetedzo & Yakavanzika> Yakavanzika tebhu> Vateereri. Sezvauri kuona mumufananidzo watinonamatira, kana iwe ukabaya mabhatani litem mubara reruboshwe, muhwindo rekurudyi iwe unoratidzwa maficha echitatu-bato iwe wawakaisa paMac ari kuwana maNzvimbo ako.
Mune yangu nyaya ini ndakakwanisa kuona kuti kune maapplication maviri ayo musimboti haafanire kuwana vandinosangana navo kuti vaite mabasa avo saka ndaona zvakakodzera kuvadzivisa kuti vasakwanise kuwana mazita angu.
Usazeze uye tarisa kuti ndeapi mashandisirwo ari kuwana ako ekutaurirana usingazive iwe uye gadzirisa iwo anofanirwa kana asingafanire kuwana iwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Manage maapplication ane mukana kune vako Vanoonana paMac
Hukuru! Ndatenda Pedro.
Pakanga paine maApplication kunze uko ayo aisafanirwa kuwana mukana kune vandinosangana navo, makarenda kana zviyeuchidzo